Tag: mitady loka an-tserasera | Martech Zone
Tag: mitady loka an-tserasera
Awardzee: Ahoana no fomba hahitana loka amin'ny Internet
Alakamisy 9 martsa 2017 Alakamisy 16 martsa 2017 Douglas Karr
Ireo orinasam-pifandraisam-bahoaka dia mailo hatrany mba hananganana fahatsiarovan-tena sy hahazo laza ho an'ny mpanjifany. Paikady lehibe iray ny fanomezana loka. Ny loka dia manana tombony betsaka noho ny salanisan'ny mpanjifa antonony: ny loka dia manome vilona vaovao ho an'ny matihanina PR hametraka vaovao sy fananana. Ireo tranonkala sy fampisehoana loka dia matetika matetika no mazoto amin'ireo mpihaino tena mifandraika amin'izany, manitatra ny tratranao. Ireo tranonkala mari-pankasitrahana dia matetika mampiasa mpitsara manana fahefana lehibe, ka alao eo aloha ny marikao